Iindlela zokunciphisa ukuboniswa kwakho kwi-BPA
Izifundo ziye zaxhamla i-BPA kwiingozi eziphezulu zeentliziyo zeSifo kunye nesifo sikashukela
I-Bisphenol A (BPA) yikhemikhali yoshishino esetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yeplastiki, efana neebhotile zentsana, amathoyizi abantwana, kunye neengxube zezoninzi zokutya neziselo. Izifundo ezininzi zesayensi-kuquka uvavanyo olukhulu kakhulu lwe-BPA oluye lwenziwa ngabantu-sele lufumene izixhumanisi phakathi kwe-BPA kunye neengxaki zempilo ezinzulu, kwisifo senhliziyo, isifo sikashukela kunye nesibindi esingaqhelekanga kubantu abadala kwiingxaki zentuthuko kwiinkalo ze-brains kunye ne-hormonal yabantwana.
Uphando olutshanje luye lwaba nemiphumo emibi yempilo, ngelixa abanye bengabikho miphumo emibi. Abadangali be-endocrine bayabonakala kunzima ukufundisisa, njengoko kungaba yingozi ngakumbi kumanani aphantsi kakhulu kunamazinga aphezulu.
Ngokuxhomekeke ekunyamezelweni kwakho kwengozi, unokufuna ukunciphisa ukubonakala kwakho kwi-BPA. Ngenxa yokusetyenziswa okubanzi kwe-BPA kwimveliso eninzi esiyifumanayo imihla ngemihla, mhlawumbi akunakwenzeka ukuphelisa ngokupheleleyo ukukhutshwa kwakho kweekhemikhali ezinokulimaza. Sekunjalo, unokunciphisa ukubonakala kwakho-kunye nomngcipheko weengxaki zempilo ezichaphazelekayo ezinxulumene ne-BPA-ngokuthatha amanyathelo okuqalwa okulula.
Ngo-2007, iQela lokuSebenza kwendalo liqeshe i-laboratory elizimeleyo ukuqhuba uhlalutyo lwe-BPA kwiindawo ezininzi zokutya kunye nokusela. Olu pho nonongo lufumene ukuba inani le-BPA kwindawo yokutya ekhutshiwe lihluka ngokubanzi. Isobho se-inkukhu, ifomula yobusana kunye ne-ravioli yayineendawo eziphezulu kakhulu zeBPA, umzekelo, ngelixa i-milk, soda kunye neziqhamo ezixutywayo ziqulethe i-chemicals.
Nazi izicwangciso ezimbalwa zokuncedisa ukunciphisa ubume bakho kwi-BPA:
Yidla Ukutya okuKhatywayo okuNcinane
Indlela elula yokunciphisa ukungenisa kwakho i-BPA kukuyeka ukutya ukutya okuninzi okunxulumene nemichiza. Yidla izithelo kunye nemifuno enomtsholongwane okanye eqhotyoshelweyo, esoloko inezondlo ezingaphezulu kunye nezondlo ezincinci kunokutya okulondoloziweyo, kunye neyona nto ingcono ngakumbi.
Khetha iKhadibhodi kunye neCoo Containers phezu kwamanqana
Ukutya okunamandla kakhulu, njenge-tomato sauce kunye ne-pasta yamathanga, i-BPA ngaphezulu kwi-bining yamanqana, ngoko kukukhetha ukukhetha iimveliso eziza kwizigulana zeglasi. Iisobho, ijezi kunye nokutya okunye okufakwe kwiibhokisi zekhadibhodi ezenziwe ngamacandelo e-aluminium kunye ne-polyethylene iplastiki ( ebhalwe ngekhowudi ye-recycling number 2 ) ikhuselekile kunamathole aneenkontila zeplastiki ezineBPA.
Musa ukukhupha i-Microwave yePolycarbonate yePlastiki yokutya yePlastiki
Iiplastiki zeplastiki, ezisetyenziselwa ukupakishwa ezininzi zokutya ezincinci, zingaphula kwiqondo eliphezulu kwaye zikhulule i-BPA. Nangona abavelisi bengafuneki ukuba bathethe ukuba imveliso iqulethe i-BPA, izitya ze-polycarbonate ezenza njalo zikhonjiswe ngekhowudi ye-7 yokuphinda iphinda iphantsi kwiphakheji.
Khetha iiplastiki okanye iiBlue Bottles kwiZiselo
Ijusi elinamathanga kunye ne-soda kaninzi ziqulethe i-BPA, ingakumbi ukuba ifike kumatshini afakwe ngeplastiki ye-BPA. Iiglasi okanye iibhotile zeplastiki zikhethileyo. Iibhotile zamanzi eziphathekayo, iiglasi kunye nensimbi engenasinxibe zilungele , kodwa ezininzi iibhotile zamanzi eplastiki ezingapheliyo ziqukethe i-BPA. Iibhotile zePlastiki ngeBPA zihlala ziphawulwe ngekhowudi ye-7 yokubuyisela.
Ukuze ugweme i-BPA ekutyeni kwakho okutshisayo kunye neengxube, shintshela kwiiglasi okanye izitya ze-porcelain, okanye izitya ezingenasici ezingenasiplastiki ezingenayo iiplastiki.
Sebenzisa ii-Baby Bottles ezi-BPA-Free
Njengomgaqo oqhelekileyo, iplastiki ecacileyo, ecacileyo iqulethe i-BPA ngelixa ipulazi elithambileyo okanye elithambileyo. Abaninzi abavelisi abaninzi ngoku banikezela iibhotile zentsana ezenziwe ngaphandle kweBPA. Nangona kunjalo, uphando olutshanje olushicilelwe kwiphepha le- Endocrinology liphonononge enye ingxube yeplastiki (i-BPS) esetyenziswe kwimveliso ebizwa nge-BPA-ezamahala, kwaye ngelishwa, kwafunyanwa ukudala ukuphazamiseka kwe-hormone kwiintlobo zeentlanzi. Izifundo ezongezelelweyo zifunekayo ukuze kuqinisekiswe ukuba sinokuchaphazeleka njani ngemiphumo kwimpilo yabantu.
Sebenzisa iFomula yeNtsana enePowinal endaweni ye-Liquid yangaphambili
Uphando olwenziwa yiQela lokuSebenza lokusiNgqongileyo lifumene ukuba iifomula zamanzi ziqukethe i-BPA ngaphezulu kuneenguqulelo ezipompo.
Ukutya okuncinci kunye nokunxilisa okudliwayo oyisebenzisayo, ukungabi ncitshiswa kwakho kwi-BPA, kodwa akudingeki ukuba unciphise ukutya okusemathinini ekunciphiseni ubume bakho kunye nokunciphisa ingozi yakho yempilo.
Ukongezelela kokutya ukutya okuncinci kwinqanaba lokutya, ukunciphisa ukutya kwakho okusemgangathweni okuphezulu kwi-BPA.
Indlela i-Islam inokukunceda ngayo ukuyeka ukutshaya
Memezela Ukuzimela Kwakho KuMlilo Wobungozi Bomngcoliseko
Inkqubo yokuHlaba okanye iNkqubo yokuSebenza-Bosch
Ubuntu kunye nokuzimela: Ukufezekiswa kwabesifazane kuJane Eyre
Indlela Yokugwema iSibetho
Ziziphi iiNombolo zesiFrentshi kunye neZahluko?
I-Mars i-Aries enezibonakaliso ze-Zodiac
I-Atlanta Irestyu yaseTshayina ivalwe ngokukhonza iiRats?
Iinkonzo kunye neNgcono yokusebenzisa ii-Movie kwiCandelo
Abaphumeleleyo beMidlalo yokuGqubela kwiGalofu
Liyiphi iQumrhu elincinci?
Iinkcazo zezeNkcazo zeZenzo eziPhambukayo
Umzekelo weZigwebo zeLwimi yokuTyala
Umboniso wePainting: Vincent van Gogh kunye neNkcazo
Yintoni i-Midrash ebuYuda?
Ukulinganisa nokuQondwa kweeThuthi zeThuthi
Iprogram elula yeJava yeJava (kunye neCode Code)
ImiSebenzi yeeMithetho neMigangatho ye-Ground ye-Golf yakho yokuqala
I-Prometheus - I-Titan yamaGritan Prometheus
Intetho kaLou Gehrig yokuthetha